ကျေးဇူးတုံ့ပြန်နေ့ | အလှအပနှင့်အတူလမ်းလျှောက်နေသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျေးဇူးတုံ့ပြန်နေ့ | အလှအပနှင့်အတူလမ်းလျှောက်နေသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Iris Beauty သည်လမ်းခရီး၌သင့်ကိုကူညီပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကံကြမ္မာကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်တွေ့ပါစေလှပသောတွေ့ဆုံမှုများပြုလုပ်ကြပါစို့သင်၏ဘ ၀ ၌ရှိနေခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကြင်နာပြီးကျေးဇူးတင်လေးမြတ်မှုအပြည့်အဝရှိခြင်းဟာ Iris Beauty ရဲ့အခိုင်အမာယုံကြည်ချက်အမြဲပါပဲ။
ပျော်ရွှင်စရာနှစ်လယ်ပိုင်းပွဲတော် 2020! ချစ်ခင်ရပါသောသူငယ်ချင်းများ၊ တရုတ်ရိုးရာပွဲတော်ဆောင်း ဦး ရာသီအလယ်ပိုင်းပွဲတော်သည်နီးကပ်လာပြီ ဖြစ်၍ ဤပွဲတော်သည်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုပြသသည်။ ယခုနှစ် coronavirus သစ်၏သက်ရောက်မှုကြောင့်ဤအားလပ်ရက်သည်အထူးအရေးကြီးသည်။ ငါတို့ကဒီအခွင့်အရေးကိုယူ
ဆောင်း ဦး ရာသီ၏ပထမဆုံးနှုတ်ခမ်း Gloss
ဆောင်း ဦး ရာသီ၏ပထမဆုံးနှုတ်ခမ်းတောက်ပမှုအဓိကလူမှုမီဒီယာကို“ ဆောင်း ဦး ရာသီ၌ပထမလက်ဖက်ရည်ဖလား” မှပြသခဲ့သည်။ မင်းဝတ်စုံနောက်လိုက်သလား ဆောင်း ဦး ရာသီ၌သင်ပထမ ဦး ဆုံးနို့လက်ဖက်ရည်သောက်ခဲ့ပါသလား။ ဆောင်း ဦး လက်ဖက်ရည်ကြမ်းပထမခွက်ကိုသင်မသောက်လျှင်သင်ကိုယ်တိုင် ၀ ယ်ပါ။
Lip Gloss အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည့်အချက်သုံးချက်
Lip Gloss အကြောင်းသင်သိထားသင့်သောအချက်သုံးချက်မိတ်ကပ်ဖွဲ့စည်းမှုတိုးတက်စေရန်အရေးကြီးဆုံးသောအဆင့်မှာမှန်ကန်သော lip gloss ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အံ့အားသင့်စရာမရှိပါ! ဒါပေမယ့်စောင့်ပါ နှုတ်ခမ်း၏တောက်ပမှုကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်ကိုလေ့လာရန်အပြင်ထွက်ပေါက်ခလုတ်ကိုသင်မနှိပ်မီ၊ lip gloss အကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော် ...